Shaqaale, shaqabixiye iyo shirkado - Krisinformation.se
TB9 Anställda och företag So
Maxaa dhacaya haddii aad xanuunsatid oo aadan shaqeyn karin? Maxay tahay caawimaadda dhaqaale ee aan heli karo haddii aan shirkadle ahay? Boggan waxan ku ururinnay isku xirayaal ku aaddan macluumaadka hey’adaha dowladda ee tusaale ahaan ku saabsan shirkadaha, shaqaleysiinta iyo jirro ku maqnaashada.
Uppdaterades 24 maj 2021 13:43
Shaqaalaha, fasaxa jirrada iyo vab
Waxaad bogga internetka ee Försäkringskassans ku jira macluumaad iyo jawaabo su'aalaha ku saabsan gunnada qofka fayruska qaba (smittbärarpenning), warqada caddeynta/shahaadad dhakhtarka, muddada sugitaanka, vab, lacagta jirada, gunada la siiyo qofka qaraabada iyo gunada la siiyo kooxaha khartarta ku jira.
Macluumaadka ay soo ururisay Försäkringskassan ee ku sabaasan fayruska korona (af Iswiidhish)
Qofka ka shaqeeya daryeelka caafimaadka
Waxa uu Socialstyrelsen soo saaray gargaar, hagitaan iyo macluumaad ku saabsan covid-19 oo loogu talogalay dadka ka shaqeeya daryeel caafimaad iyo daryeelka bukaanka, daryeelka caafimaadka kamuunka iyo daryeel bukaanka, adeega bulshada iyo daryeelka ilkaha.
Waxa uu Socialstyrelsen ku siinaaa macluumaad iyo gargaar dadka ka shaqeeya daryeelka iyo xanaanada (ku qoran af Iswiidhish)
Hey'ada Socialstyrelsen iyo jawaabaha su'aalaha ku saabsan covid-19 ee loogu talagalay dadka ka shaqeeya daryeelka, kalkaalinta iyo ilkaha (af Iswiishish)
Guriga ku shaqee
Loo shaqeeyahu waa inuu shaqaalaha ku guubaabiyo inay guriga ku shaqeeyaan marka ay taasi suurtogal tahay, oo loo shaqeeyahy bixiyo fursadaha/shuruudaha ay taasi ku suurtogalayso. Taasi waxay noqon kartaa in adeega dhijitaalka la isticmaalo, dib loo dhigo adeega safaarada shaqadu dadka dirto, shirarka iyo waxyalaha la midka ah ee la diyaariyey. Haddii ay fursadi jirto waa in sidoo kale saacadaha shaqada lagu beegaa si looga hortago saxmad/ciriiri badan ee ka jira gaadiidka dadweynaha iyo goobaha shaqada.
Talooyin guud oo loogu tala galay meelaha ay hawluhu ka socdaan
Cid walba waxay mas’uuliyad ka saarantahay in ay ka hortagto faafitaanka cudurka covid-19. Hey’adda caafimaadka bulshadu waxay soo saartay talooyinka guud ee soo socda ee ku jiheysan meelaha hawluhu ka socdaan ee Iswiidhan:
Si qoraal ah macluumaadka ugu muuji booqadayaasha, shaqaalaha iyo macaamiisha.
Dhulka ku calaamey masaafada la isu jirsanayo meelaha ay dhici karto in saf lagu galo.
Alaabta meesha u dhig si ciriiri ka fogeyneysa.
Kulamada digital ka dhig.
Hubi in gacmaha lagu dhaqi karo saabuun iyo biyo ama la isticmaali karo jeermis dilaha gacmaha la marsado.
Xadey inta qof ee isku hal mar goobta joogi karta.
Ku beegista saacadaha furitaanka.
Waxa uu cudurka aafada ahi saameyneyaa sida badeecadaha iyo adeegyada loo kala gadan karo. Si looga fogaado faafitaanka covid-19 ee ka dhaceysa ganacsiga dhexdiisa waa in rugaha gancsiga, meheradaha, dukaamada/bakhaarada waaweyn, dukaamada iyo ganacsiyada la midka ah
tiriya tirada dadka soo booqanaaya si uu qof kastaa toban mitir oo laba jibbaaran ugu helo.
waa inaad qaadaan talaabooyinka ku haboon si loo hubiyo in dadku ay qofqof waxqabadyada ugu soo booqdaan iyagoo aanay cidi la socon.
la yimaado habab kale oo wax loogu bedelo safafka loo galaayo makhalka/meesha lacagta lagu bixiyo iyo siinta alaabta iyo sidoo kale inay tusaan inay macaamiishu kala fogaadaan.
Talooyin iyo xeerarka loogu talogalay makhaayadaha cuntada iyo baararka
Si loogu dhimo faafitaanka covid-19 ayaa waxa shaqeynaaya inay:
Bixinta khamrada mamnuuc tahay inta u dhaxeysa saacadaha 22.00-11.00. Maadaama oo goobaha adeega bixiya/mukhaayadaha ay tahay in ugu dambeyn 20.30 la xiro ayaa laakiin taasi micnaheedu yahay in bixinta khamrada ee lagu sameeyo goobaha adeega bixiya/makhaayadaha ay ficil ahaan mamnuuc tahay laga bilaabo 20.00.
Macluumaad ku saabsan bixinta khamrada ee goobaha adeega/makhaayadaha. (Boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)
Goobaha adeega/makhaayadaha waxay u furnayaan iibinta cuntada iyo cabitaanka aan lagu cuneynin goobta, taas waxa loola jeedaa. qaadashada/takeaway.
Hubi in dadka soo booqdeyaashu ay ugu yaraan hal mitir ka fogaan karaan dadka kale iyo in tirada dadka soo booqdayaasha ah ee miis wada fadhidaa ay ugu badnaan ahaato afar qof xitaa hadii ay isla socdaan.
Cunto iyo cabitaan ayaa kaliya loo geynayaa dadka soo booqdayaasha ah ee fadhiya miiska ama miiska baarka. Haddii ay suurtogal tahay ayaa la isku ogol yahay inay dadka soo booqdayaasha ah iyagu cuntadooda iyo cabitaankooda dalbadaan oo ay soo qaataan, ilaa iyo inta aanay keeni karin saxmad/ciriiri badan ama saf.
Qaad tallaabooyin si looga fogaado saxmad/ciriiri badan ee ka yimaada safafka, miisaska agtooda, bufeega/cuntada iyo sharaabka miiska weyn laga soo gurto yaala ama miiska baarka.
Bixinaaya fursada gacmaha saabuun iyo biyo loogu dhaqaayo ama bixinaaya isbiirtada gacmaha.
Ku wargaliya soo booqdayaasha sida ay ugu yarayn karaan halista faafitaanka cudurka.
Sida uu sharcigu dhigaayo ayuu kamuunada mas'uul ka yahay kormeerida goobaha adeega/makhaayadaha. Haddii aad dareemeyso inaan xeerarka la raaceynin ayaad la xiriiri kartaa kamuunka ay goobta adeegu ku taalo.
Boggan soo socda ee Folkhälsomyndigheten waxa ku jira macluumaad dheeraad ah oo la akhrisan karo.
Xeerarka cusub ee loogu talogalay makhaayadaha cuntada iyo baararka
Su'aalo iyo jawaabo ku saabsan sharciyada khuseeya makhaayadaha, baararka iwm.
Su'aalo iyo jawaabo ku saabsan sharciyada cusud ee khuseeya mukhaayadaha/goobaha adeega u sameeya bulshada.
Soo jeedinta wax waafajinta tallaabooyinka xakamaynta infegshanka
Gaadiidka dadweynaha iyo saxmada/ciriiriga badan
Degmooyinka iyo Goballada Iswiidhan, SKR, ayaa isku ururiyay waxa shirkadaha gaadiidka dadweynuhu ay sameyn karaan si loo yareeyo ciriiriga oo sidaasna looga hortago faafitaanka cudurka. Shirkadaha abaabula safarrada basaska-, tareennada- ama xagga badda ayaa u taliya sharciyada khuseeya waxa lagu safrayo ee ay shirkaddu leedahay.
Si looga fogaado faafitaanka covid-19 ee ka dhaceysa gaadiidka dadweynaha iyo gaadiidka bulshadu raacdo waa in waxqabadyadu ay:
hubiyaan in gaadiidka la wadan/kaxaysan karo illaa heerka lagama maarmaanka u ah si loo yareeyo khatarta saxmad/ciriiri badan.
xadidaada tirada rakaabka ee saaran gaadiidkiiba,
rakaabkiisa ku wargaliya sida ay ugu yarayn karaan halista faafitaanka fayruska.
Xadidaadaha saaran gaadiidka dadweynaha ee masaafada fog
Tirada rakaaabku waa inaanay ahaanin wax ka badan kala bar kuraasta lagu fariisto ee baska ama tareenka uu khadkiisa safarku ka dheer yahay shan iyo toban mayl.
Waxaad macluumaad dheeraad ah oo xadidaadaha gaadiidka dadweynaha ee masaafada fog ku saabsan ka helaysaa Bogga internetka ee xukuumada (Boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)